လူမီနီယမ်အေးကုန်သည်ကြီးများအသင်း Diecasting စက်အစိတ်အပိုင်းများ China Manufacturer
Ruizhun Precision Metal Co., Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer Main Mark: Americas , Asia , East Europe , Europe , North Europe , West Europe ထုတ်ကုန်:41% - 50% Cert:ISO/TS16949, ISO14001, ISO9001 ဖေါ်ပြချက်:ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကာစ်မှို,သတ္တုသေ Cast ကို,မြင့်မားသောဖိအားသေကာစ်
Home > ထုတ်ကုန်များ > လူမီနီယမ် Die ကာစ် > လူမီနီယမ်အလွိုင်းသေကာစ်ဖွဲ့စည်းခြင်း > လူမီနီယမ်အေးကုန်သည်ကြီးများအသင်း Diecasting စက်အစိတ်အပိုင်းများ
နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားဖြစ်ထူးအိမ်သင်အမှတ်တရလူမီနီယမ်နည်းပညာ ပို. ပင် application များအတွက်တစ်ဦး option ကို ချ. လူမီနီယံသေဆုံးစေတော်မူပြီ။
Ruizhun Precision သတ္တု Co. , Ltd မှ (RZ) လူမီနီယံသေ Cast ပေးပါဝင်နေသည်။ ဤရွေ့ကားထပ်မံကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုကြသည်
နှင့်အခြားသောမော်တော်ယာဉ်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အစိတ်အပိုင်းများကိုအရည်အသွေးမြင့်ကုန်ကြမ်းများလုပ်နေကြသည်။ ကျနော်တို့ဟာအလွန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းအကွာအဝေးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကိုဆက်ကပ်။
ကျယ်ပြန့်လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးအတွက်အသုံးပြုထိုကဲ့သို့သောမဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်မော်တော်ယာဉ်, အိုင်တီ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်အခြားမြင့်မားသောဝယ်လိုအားစက်မှုလုပ်ငန်းများ, ချ. သေဆုံး,
CNC စက်များအတွက်ထုတ်လုပ်မှုခဲအချိန်ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်များနှင့်အရေအတွက်သည်နှင့်အညီ, 1-4wks ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဖောက်သည်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုကြလိမ့်မည်